Nagu saabsan - Shandong Huashili Aaladda Teknolojiyada Co., Ltd.
Shandong Huashili Aaladda Teknolojiyada Co., Ltd. oo ku taal magaalada Rizhao, inta badan waxay ku hawlan tahay calaamadeynta muraayadaha tooska ah ee muraayadaha tooska ah iyo jarista mashiinka wax wada-qabsiga, mashiinka wax lagu gooyo muraayadda otomaatiga ah, mashiinka goynta tooska ah ee loo yaqaan 'NC-multi-cut, mashiinka goynta tooska ah ee muraayadda, Mashiinka wax lagu raro dhalada oo otomaatig ah, mashiinka goynta dhagxaanta si otomaatig ah loo gooyo, iyo mashiinka wax lagu shiido geesaha.
Tikniyoolajiyadda Huashili waa nooc ka mid ah cilmi baarista otomaatikada qalabka farsamada iyo horumarinta, wax soo saarka, iibinta mid ka mid ah shirkadaha wax soo saarka tikniyoolajiyadda sare. Shirkaddu waxay leedahay khibrad badan oo soo saarista qalabka otomaatigga ah, karti wax soo saar, heer teknoolojiyad iyo awood dhaqaale oo dhammaystiran isla warshadda oo ku jirta safka hore ee warshadaha gudaha, cilmi baarista iyo qalabaynta qalabaynta otomaatiga ah, qalabka waxqabadka iyo qaabaynta ayaa ku jirtay. heerka hogaaminta gudaha, farsamooyin dhowr ah. waxay buuxiyeen marankii guriga. Wanaagga kadib - adeegga iibka iyo qiimaha macquulka ah, muddo dheer si loogu guuleysto ammaanta macaamilka. Iyadoo la raacayo mabda'a ah "iimaanka wanaagsan marka hore, qanacsanaanta macaamilka", shirkadeena waxay dhistay xiriir iskaashi muddo dheer ah oo lala yeesho shirkado badan.
Qalabka wax soo saar ee shirkadeena wuxuu leeyahay astaamaha tayada wanaagsan, saxsanaanta sare, aaga sagxada yar, la dhaqaajin karo, maalgashiga yar, waxtarka dhaqsaha leh iyo wixii la mid ah, taas oo ah sheyga ugu fiican ee warshadaha wax soo saarka qoto dheer ee muraayadda ah.
Waxaan si kal iyo laab ah kuugu soo dhawaynaynaa inaad soo booqato oo aad nala xaajooto.
Iyada oo ku saleysan mabda'a ah 'marka hore daacadnimada, qanacsanaanta macaamiisha', shirkadeena waxay sameysay xiriir iskaashi muddo dheer ah shirkado badan. Gelitaanka 2020, shirkaddu waxay gashay qorshe cusub oo shan sano ah waana hal talaabo oo u dhow inay noqoto sumcad saameyn ku leh wax soo saarka casriga ah. Ganacsiga istiraatiijiyadeed ee shirkaddu waa mid furan, hal-abuurnimada tikniyoolajiyaddu waa mid aad u firfircoon, maaraynta wax soo saarka ayaa aad loo sifeeyay, howlaha ganacsina waa kuwo la jaangooyay oo waxtar badan. Dadka Huashili waxay la kulmi doonaan fursado iyo caqabado cusub maskax wanaagsan oo furan. Shirkaddu had iyo jeer waxay u qaadataa isbeddelka tikniyoolajiyadda wax soo saar sidii himiladeeda, waxayna ku dadaashaa nolosha si ay uga caawiso horumarinta dhaqaalaha Shiinaha.